लुट्नु महानतम् कला हो। यसको जगेर्ना हुनुपर्छ। कलाको जगेर्ना नगर्ने देश असभ्य र जंगली हुन्छ।
लुट्न पाउनु मानव अधिकार हो। यसको रक्षा हुनुपर्छ। मानव अधिकारको रक्षा नहुने देश बर्बर र आततायी हुन्छ।
आजसम्मको मानव इतिहास के हो? लुटेराहरूको विजय गाथा र लुटिनेहरूको आर्तनाद! मानव समाजले पूजा गर्ने सिकन्दर र कोलम्बस को हुन्? महान् लुटेरा! बाइबल र वेद के हुन्? लुटशास्त्र!
(सबैभन्दा चलेको फिल्म कुन हो? 'लुट'। )
त्यसैले भन्छु म– लुट्न पाउनुपर्छ।
यसै पनि देश लुटेराहरूको भूस्वर्ग हो। यो जति लुट्न सजिलो देश अर्काे कुन छ?
कसले लुटेको छैन यहाँ? रातारात उमि्रने आलिशान महलको जगमा के छ? लुट! नमस्कार र प्रतिष्ठाका जन्मजात हकदार को छन्? लुटेरा! मानव जीवनको श्रेष्ठ पुरुषार्थ के हो? लुट्नु!
हामीलाई लुट्नबाट रोक्ने कसले? राज्यले? राज्य स्वयम् लुटेराहरूको क्रीडास्थल हो।
नेताहरूले? ती स्वयम् पारंगत लुटेरा हुन्। एक लुटेराले अर्काे लुटेरालाई नलुट् भन्न सक्दैन। प्रश्न व्यावसायिक नैतिकता र मर्यादाको छ।
कसले रोक्ने? कसले छेक्ने हामीलाई? पुलिसले? वकिलले? न्यायाधीशले? शिक्षकले? पत्रकारले? कविले? लुटमा संलग्न को छैन यहाँ?
नेपाली भन्ने जीव बिछट्टै गजबको हुन्छ। लुटिन र लुटाउन सदा तत्पर! हाडछाला टाक्सिएर लौरीपिञ्जर हुँदा पनि, बाढीले जायजेथा बढारेर निरीहतम् हुँदा पनि उसँग लुटाउनका लागि सधैँ केही न केही अवश्य बाँकी हुन्छ। त्यसैले भनेको यो देश लुटेराहरूको भूस्वर्ग हो।
यस देशका लुटेरा यति प्रवीण र छट्टु छन् कि कुनै दिन यस देशमा फूलको सुवास लुटिनेछ, जूनको शीतलता लुटिनेछ, पर्वतको उचाइ लुटिनेछ, नदीको प्रवाह लुटिनेछ। लुटेराहरूको तर्फबाट म ग्यारेन्टी दिनसक्छु।
जनता भनेको कहिल्यै पूर्ण भोग गर्न नपाउने उपभोक्ता हो। नामै त उप!
उपभोक्ता यहाँ लुटिइन्छ, ठगिइन्छ। लुटिनु र ठगिनु त उसको नागरिक दायित्व हो। ऊ लुटिएको छ, र त देशको धुकधुकी चलेको छ। ऊ लुटिएन भने देश निष्प्राण हुन्छ। त्यसैले लुटेराका अधिकार हनन् हुनुहुन्न, सीमित हुनुहुन्न। लुटिनेका हक–अधिकारका कुरा गर्नु सर्वथा 'वेस्ट अफ टाइम' हो, समयको सत्यानाश! संसारको नियमै यस्तो छ। ठूलो माछाले सानो माछा खान्छ। ठूलो माछाको मुखमा पर्नु नै सानो माछाको जीवनको एकमात्र औचित्य हो। त्यसैले त भनेको नि लुट्न पाउनुपर्छ। मत्स्यन्यायमा चल्ने यो संसारको नियम, चलन, संस्कार र परम्परालाई कसैले चुनौती दिन्छ भने त्यो मूर्ख हो। त्यसको मूर्खताको औषधि यथाशीघ्र गर्नुपर्छ। विडम्बना, यो संसारमा केही मूर्ख छन्। यो देशमा पनि छन्। तिनीहरू लुटिनेप्रति सहानुभूति राख्छन्। अरूलाई लुट्न अस्वीकार गर्छन्। लुटेराहरूको विरोध गर्छन्। इतिहासविरोधी कुरा गर्छन्। तिनलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ। र, न्यूनतम सजाय तोक्नुपर्छ– फासी।
यस देशका सम्पूर्ण लुटेराहरूको तर्फबाट म फेरि पनि माग गर्छु– लुट्न पाउनुपर्छ। निर्बाध, बेफिक्री लुट्न पाउनुपर्छ।
एक छाक टन्न नखाई, पेट मारी–मारी एक छेस्को सुन जोड्न खोज्नेलाई लुट्न पाउनुपर्छ। सुनमा पित्तलको 'फ्युजन' गर्न पाउनुपर्छ। अन्यथा सडकमा ओर्लिनेछौँ हामी र देशै ठप्प पार्दिनेछौँ। घरमा घुनयुक्त अन्न पनि नहुने गरिब नेपालीले किन लाउनुपर्‍यो शुद्ध सुन?
हानिकारक जीवाणु भएको दूध बेच्न किन नपाउने हामीले? प्रदूषित पानी बेच्न किन नपाउने? उपभोक्तालाई हामीले जे दिन्छौँ, उसले हात थापेर लिनुपर्छ। उसले उपभोग गर्न पाइरहेको छ, त्यही ठूलो कुरो हो। चिजको मूल्य तिर्नुको अर्थ चिजको गुणस्तर/दोषस्तरमा प्रश्न गर्ने अधिकार पाउनु किमार्थ होइन। हामी लुटेराहरूको नियतमा प्रश्न गर्नु हाम्रो मानहानि हो। मानहानि गर्न पाइँदैन भनेर कानुनमा लेखिएकै छ। गर्नेलाई दण्ड–सजायको व्यवस्था छ। के उपभोक्ता कानुनभन्दा माथि छ?
खबरदार! हामीले लुट्न पाएनौँ भने, हाम्रो लुट्ने अधिकारमा कसैले अंकुश लगाउन खोज्छ भने त्यसको मूल्य सिंगो देशले चुकाउनुपर्नेछ। लुटिनेहरूका आन्दोलनमात्र देखेको छ यो देशले। हामी लुटेराहरूको आन्दोलन देखेको छैन। हाम्रो 'सुपर चेतनशील' र विशाल जमातले चाह्यो भने यो इँटाकार देशका एक–एक इँट बजाइदिनेछौँ। इतिहास साक्षी छ– यो देशले सदा लुटेराहरूको खिदमत गरेको छ। सदा उनीहरूको पक्षमा रहेको छ यो देश।
लोकतन्त्र र गणतन्त्र लुटिनेहरूको मात्रै होइन। लुटेराहरूको पनि हो। लोकतन्त्र र गणतन्त्रको भोगचलन आ–आफ्ना नियत र औकातअनुसार गर्ने हो। अधिकांश नेपाली लुटाएर गर्छन्, हामी लुटेर गर्छौं। हामीले के गल्ती गर्‍यौँ?
घरमा था'पत्तो नदिई गायिका भएँ : रमिला न्यौपाने, लोकगायिका
गायिका देविका केसीको साथ लागेर म स्कुलदेखि नै गायनमा अग्रसर हुन्थेँ। घरमा अवस्था कस्तोसम्म थियो भने एनटीभीबाट रामप्रसाद खनालले चलाउने दोहोरी कार्यक्रममा म सहभागी हुँदा छरछिमेकले देख्लान् भनेर आमा चिन्तित...